October 25, 2019 - HealthTimes
October 25, 2019 October 25, 2019 Michael Gwarisa
THE European Union (EU) has stepped up its humanitarian efforts in Zimbabwe through an additional US$60 million (EUR 53 million) under its National Indicative Programme. By Michael Gwarisa The funds will directly support Zimbabwe in the fields of health and resilience building. In a statement, the EU Ambassador to Zimbabwe Mr Timo Olkkonen said, “US$38 million will support public health service delivery by strengthening primary care systems, capacitating human resources and enhancing community participation.” US$18 million will support household and communities in vulnerable situations across the country by increasing their…
BREAKING NEWS, Health NewsEU, Mr Timo OlkkonenLeave a comment
HEALTH and Child Care Minister, Dr Obadhia Moyo has castigated sections of civil society whom he accused of misleading the people of Matebeleland into protesting against government’s E-nursing recruitment which they accused of favoring candidates from Mashonaland and other provinces other than Matebeleland. By Michael Gwarisa Minister Moyo said the E-Nursing recruitment system was still anew phenomenon in Zimbabwe and is bound to have technical glitches but allegations of regionalism or favoritism were a creation of uniformed civil society organisation who want to gain relevance from creating mayhem. We have…
BREAKING NEWS, Health NewsDr OBADIAH mOYO, MATEBELELAND, regionalismLeave a comment
RIGHT Here, Right Now Zimbabwe alongside other organisations have submitted their position paper to parliament proposing there be removal of age restrictions to access to Sexual, Reproductive Health and Rights Services. By Kudakwashe Pembere Speaking at a SafAIDS arranged male engagement workshop on removal of access to SRHR to adolescent girls, Youth Engage Programs Manager Ignatius Chipendo said there have been discussions surrounding age of consent to sex, marriage and access to sexual reproductive health. We have already submitted a position paper now to parliament alongside other consortiums and partners…